အခွေပေါင်း ၄ သိန်းကျော်ရောင်းချခဲ့ရတဲ့ TWICE အဖွဲ့ရဲ့ ‘Candy Pop’
JYP Entertainment ကနေပြီး မြေတောင်မြှောက်ပေးထားတဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၉ ယောက် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ TWICE ဆိုတဲ့ Kpop အဖွဲ့လေးဟာ ခုဆိုရင် Japan နိုင်ငံမှာ သူတို့လေးတွေရဲ့ ဒုတိယမြောက်ဂျပန် Single ဖြစ်တဲ့ ‘Candy Pop’ ဟာ ရောင်းအားတွေအရမ်းကောင်းနေပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့ကမှ ထုတ်လိုက်တဲ့ TWICE အဖွဲ့ရဲ့ ‘Candy Pop’ ကတော့ ထုတ်ဝေပြီး ပထမဦးဆုံးအပတ်မှာတင် အခွေပေါင်း […]
Music NewsJ-PopK-PopLeaveacomment
ဘယ်လို ဘယ်လို ??? ဒီသတင်းကိုစမြင်သူတိုင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာ အရင်ဆုံးပေါ်လာတာကလည်း အဲဒီ “ဘယ်လို ဘယ်လို” ဆိုတဲ့မေးခွန်းပါပဲ။ Cryptocurrency တွေ hack ခံလိုက်ရတာနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက Idol တွေလစာမရတာ ဘယ်လိုတွေများပတ်သက်နေတာတုန်း… အဲဒီလိုတွေးမိတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ လဦးပိုင်းတုန်းကသတင်းတွေနဲ့ နည်းနည်းကွင်းဆက်ပြတ်နေလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင် အလင်းပြပါ့မယ်.. ဆက်သာဖတ်သွားကြည့်လိုက်ပါ။ Concept သောက်ဆန်းကြီးတွေနဲ့ Idol အဖွဲ့တွေကိုဖန်တီးဖို့ဝန်မလေးတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက ဒီနှစ်အစောပိုင်းတုန်းက မြင်ဖူးသမျှ ဆန်းပေ့ဆိုတဲ့ Idol အဖွဲ့တွေနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင်တောင် အပုံကြီးပိုဆန်းနေသေးတဲ့ […]
Music NewsJ-PopLeaveacomment
ချစ်စရာအသေကောင်းတဲ့ TWICE ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ဂျပန် Single – ‘Candy Pop’
On January 12, 2018 By Atsuko
TWICE က သူတို့ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ဂျပန် single ဖြစ်မယ့် ‘Candy Pop’ ရဲ့ Music Video ကို ထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ TWICE ရဲ့သီချင်းဆိုတော့ ဝေးဝေးပြေးစဉ်းစားနေစရာမလိုပါဘူး.. ချစ်စရာကောင်းချက်က သေလို့ရပါတယ်။ ဒီသီချင်းထဲမှာ TWICE အဖွဲ့သားတွေကို Anime ဇာတ်ကောင်လေးတွေအသွင်နဲ့ မြင်တွေ့ရမှာပါ။2Dimensions လောကမှာရှိနေတဲ့သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ performance ကိုအားပေးနေတဲ့3Dimensions ကကောင်မလေးဆီကို သွားရောက်ဖို့ကြိုးစားကြမှာပါ။ သူတို့အဲဒီလိုကြိုးစားတာကို […]
Music NewsJ-PopK-PopNew ReleaseLeaveacomment
တချို့လူတွေက ရှိုးပွဲတွေမှာ အားရပါးရအားပေးရတာကို ဝါသနာပါကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘေးလူတွေကို အနှောင့်အယှက်အကြီးကြီးဖြစ်စေတဲ့အထိ အားပေးမိရင်တော့ ရှိုးပွဲစီစဉ်သူတွေရဲ့သတိပေးခြင်းကိုခံရနိုင်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့တုန်းက တိုကျို Akihabara UDX မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Love Live! Sunshine!! event မှာ အဲဒီလိုအားရပါးရအားပေးတတ်တဲ့ fan တစ်စုက အခြားပွဲလာပရိသတ်တွေကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အထိ သောင်းကျန်းခဲ့ကြတာမို့ ကြည့်မရသူတွေက သူတို့အဖွဲ့သောင်းကျန်းနေကြတာကို ဗီဒီယိုရိုက်ပြီး twitter ပေါ်တင်လိုက်ကြပါတယ်။ အဲဒီဗီဒီယိုတွေထဲမှာဆိုရင် လမ်းသွားလမ်းလာတွေ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အထိ […]
BoA ရဲ့အသစ်စက်စက် MV ‘Jazzclub’
On December 26, 2017 By Atsuko
Queen of K-Pop လို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ခံရတဲ့ K-Pop/J-Pop အဆိုတော် BoA ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက Jazzclub လို့အမည်ရတဲ့ သူမရဲ့အသစ်စက်စက် MV ကို release လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Jazzclub သီချင်းဟာ ၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့ထွက်ရှိမယ့် သူမရဲ့ ၉ ခုမြောက် ဂျပန် album ဖြစ်တဲ့ 私このままでいいのかな (Watashi Konomama de Iinokana) မှာပါဝင်မယ့်သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ […]
Music NewsJ-PopNew ReleaseLeaveacomment
Aimer နဲ့ Amazarashi တို့ရဲ့ ၂၀၁၈ မတ်လမှာလုပ်မယ့် Asia Tour
On December 15, 2017 January 23, 2018 By Atsuko
အဆိုတော် Aimer နဲ့ Rock Band တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Amazarashi တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ Asia Concert Tour အကြောင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၈ မတ်လအတွင်းမှာ ရှန်ဟိုင်း၊ ထိုင်ဝမ်နဲ့ စင်ကာပူမြို့တို့မှာ လှည့်လည်ဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်ပြီး မတ်လ ၂-၃ ရက်နေ့တို့မှာ ရှန်ဟိုင်း၊ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ထိုင်ဝမ်နဲ့ ၃၁ ရက်နေ့မှာ စင်ကာပူနိုင်ငံတို့မှာ ဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Aimer ဆိုတာကတော့ […]